Xikmadii Maamul Ee Cumar Binu Khadaab (Radiyallaahu Canhu) - Boga Wise Man
December 20, 2020 qawdhan
Asxaabigii weynaa, marna amiirul mu’miniin, marna tobankii janada loogu bishareeyey Cumar Binu Khadaab, radiyallaahu canhu, wuxuu ahaa mid kamida hogaamiyeyaasha maamul wanaaga dunida kuwa ugu fiicnaa ee soo mara adduunka.
Markii uu Cumar ahaa amiirka mu’miniinta waxa jirta dhaqan cajiiba oo uu lahaa oo ahaa in uu magaalada dhex lugeeyo habeenkii iyo maalintiiba. Waxaana lagaa soo wariyay qisooyin badan oo cajiiba oo Cumar oo lugaynaya iyo dadkii magaalada dhexmaray oo laga dheehdo xikmad, naxariis, daryeel iyo maamul wanaag.
Saddex kamida qisooyinkaa iyaga ah hadaynu dul istaagno waxa kamida qisada uu kusoo baxayo hooyada socotada ah ee ilmaheedu ooyayo ee u sheegaysa inay naaska ka jarayso ilmaha sababtoo ah Cumar baa ciyaalka lacag u qoray marka naaska laga jaro ee ay yara weynaadaan. Inkastoo ilmaha yari aanu gaadhin wakhtigii naaska laga jari lahaa hadana hooyadaasi waxay u baahnayd lacagta. Cumar intuu ka naxay arrinkii ayuu ku yidhi gabadhii dhib malaha ee sii naaska ilmaha anaa saxaya arrinkaase. Subaxnimadii xigtayna waxa uu kasoo saaray qaraar sheegaya in carruurta oo dhan loo qoray lacagta.
Qiso kale oo Iyana taariikh-yahanadu badanka soo qaataan hadaynu dul istaagno; waxa la yidhi Cumar ayaa habeen maqlay hooyo iyo inanteedii oo isku haysta caanaha aynu badhaxno oo biyo ku darno iyo inaga daa hooyo waxba kuma darayno oo waa mamnuuce. Kadib hooyadii ayaa inanta ku tidhi naa Cumar inama arkayee waa caadi ha biqin markaasay inantiina ugu caqli celisay islaantii in hadaanu Cumar arkaynin uu Illaahay arkayo. Cumar inanta iimaankeeda iyo caqligeeda intuu ka helay ayuu inankiisa u doonay oo u dhisay. Waxa la sheegaa in wiilkii Cumar dhalay iyo inantii caqliga badnayd gabadh ay dhaleen ay dhashay amiirkii mu’miniinta ee Cumar Binu Cabdicasiis.
Qisada saddexaad ee aan rabo inaan xuso waa Iyana mid caan ah oo lagu xasuusto cadaaladii Cumar Binu Khadaad radiyallaahu canhu. Waxa la sheegaa in maalin uu kusoo baxay nin Yuhuudiya oo dawarsanaya. Kadib uu kexeeyey oo ku yidhi kaalay aniga ila soo qadee. Balse qadadii uu Cumar cunayay uu qawaday ninkii Yuhuudiga ahaa isagoo sheegay inuu mid ka fiican cuno qadadii loo soo dhigay. Cumar wuxuu amray in baytul maalkii muslimiinta looga qoro lacag biil ah sida muslimiinta looga siiyana looga siiyo. Markii la yidhi ninkani waa Yuhuudina oo muslim maaha ee maxaad ugu qoraysaa lacagtana wuxuu ku jawaabay in uu Madina kula nool yahay ninkani oo xil ka saaran yahay dawlada muslimiinta xuquuqna ku leeyahay. Waxay taariikh yahanadu ka waramaan in ninkii Yuhuudiga ahaa islaamay isagoo ay cajabisay cadaalada Islaamka ee Cumar tusay.
Hadaba maxaan u soo qaatay maanta qisooyinkan Cumar Binu Khadaab? Waxaan uga dan leeyahay muhiimada ay leedahay in hogaamiyeha ummadeed lugeeyo oo dhexmaro bulshada uu u taliyo. Isagoon kamarado iyo saxaafadi dhinac ordaynin. Waa inuu dhexmaro isagoo dadka raba inuu kuwooda dhiban caawiyo. Waayo hadii uu xafiiskiisa joogo waxa dhici karta in war badan aanu soo dhaafinba shaqaalihiisa oo ay is yidhaahdaan muhiim maaha ama iskaba illoobaan. Laakiin markuu hogaamiye dhexmaro bulshadiisa wuxuu ogaanayaa xaalada dhabta ah ee ay ku sugan yihiin dadkiisu. Waxaanu gaadhi karayaa go’aano dadka noloshooda u fudaydinaya oo adeega dawlada sare u qaadaya.
Cumar Bin Khattab Somalia Somaliland Taariikh
Previous Post Taariikhda Burburka Somaliland – Qaybta Afraad
Next Post Taariikhda Burburka Somaliland – Qaybtii Shanaad